C008 : ยาแก้ตานขโมย – ดีกว่าทิ้ง ชุมชนคนไม่ทิ้งของ DEE KWA THING
Home สินค้าราคาส่งจากโรงงาน C008 : ยาแก้ตานขโมย
🍃Organic 100% ..
၁ တွဲ ၄ဗူး =600 B.
၁ ဖာ( ၄ဗူးx6 တွဲ) =3,000 B.
၁၀ ဖာ(၄ဗူးx၆၀ တွဲ) =27,600 B.
ဖာ ၃၀(၄ဗူး x၁၈၀တွဲ)=78,900 B.
ဖာ 50 အထက်+++ အထူးဈေးနူန်း !!
💲 💲ရောင်းရသောအရေအတွက်များပေါင်း၍ သတ်မှတ်နူန်းပြည့်မှီပါက လက်ဆောင် ရွှေဆုမဲများပေးအပ်သွားဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
အန္တရာယ်ကင်းတဲ့ နိူင်ငံတကာအဆင့်မှီထုတ်ကုန်ဖြစ်ပြီး ထိုင်းနိူင်ငံ7Eleven ဆိုင်များတွင်ရောင်းချတဲ့အရေအသွေးစိတ်ချရတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်
…ကလေးချစ်သောမိဘများအနေနဲ့ဆောင်ထားသင့်တဲ့ဆေးစွမ်းကောင်းတစ်လက်ဖြစ်တဲ့အတွက် ဈေးကွက်အတွင်းလက်ဦးမှုရအောင်မြန်မြန်သာဆက်သွယ်လိုက်ကြရအောင်နော် …!!!
1 ဖာနှင့်အထက်မှာယူပါကရန်ကုန်မြို့တွင်းDeli ခFree ဖြစ်ပြီးနယ်မြို့များမှမှာယူပါက ပို့ခ 10000 ကျပ်နှင့်အထက်ပါ။
တစ်လလျှင်ဖာ100 နူန်းဖြင့် ၃လဆက်တိုက်ရောင်းအားရှိပါက အဆိုပါကိုယ်စားလှယ်အား၎င်း တိုင်း/ပြည်နယ်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်သတ်မှတ်သွားမှာဖြစ်ပြီး အဆိုပါတိုင်း/ပြည်နယ်အတွင်းရှိဆိုင်ခွဲများသို့ပစ္စည်းများပို့ဆောင်ခွင့်တစ်ဦးတည်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်…
တစ်တွဲလျှင် ဘတ် ၆၀၀နှင့်ညီမျှသောမြန်မာငွေဈေးအတိုင်းရောင်းချရမှာဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်ထားသောနူန်းထားထက်ဈေးလျော့၍ရောင်းပါက ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှထုတ်ပယ်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်…..
รหัสสินค้า: C008 หมวดหมู่: สินค้าราคาส่งจากโรงงาน
Share "C008 : ยาแก้ตานขโมย" on Facebook
Share "C008 : ยาแก้ตานขโมย" on Google Plus
Pin "C008 : ยาแก้ตานขโมย" on Pinterest
มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “C008 : ยาแก้ตานขโมย” ยกเลิกการตอบ
IT00010 :: กล้องวงจรปิด T&D รุ่น TCI006 อินฟราเรด
BT002 :: KOSE
IT0009 :: ผ้าปิดจมูกแบบผ้า ( แพ็คละ 12ชิ้น )